Deddeebiin beellama mana murtii kanaa na nuffisiiseera.” Jaal Yaasoo Kabbabaa – Kichuu
Deddeebiin beellama mana murtii kanaa na nuffisiiseera.” Jaal Yaasoo Kabbabaa
“Deddeebiin beellama mana murtii kanaa na nuffisiiseera.” Jaal Yaasoo Kabbabaa
Kabajamoo mana murtii, nuti yaada wayyaa’aa uummanni keenya barbaadu dhiyeessine. Warri Mootummaa garuu ofii yaada bitamuu hin dandeenye qabaachuu hubatanii filannoo keessaa nabaasuuf na hidhan. Himanni nutti dhiyaate kan oduu safara keessaallee hin guutneedha. Shororkeessaa jedhanii ana nama biyyikoo na barbaaddu nahimatan. Ana uummatikoo na eega. Shororkeessaan isa yaadaan nafalmuu dadhabee nahidhee maatiikoo bittimse, isa hojiikoo irraa nadhorkee galiikoo addaan kute,isa kaayyookoo irraa nahanqisuuf naqabee jiru malee ana miti
Deddeebiin beellama mana murtii kanaa na nuffisiiseera. Mirgi saffisaan haqa argachuukoo sarbameera. Yeroo 30 oliif dhiyaadheera. Kun waan seeraa fi haqaa bira darbee namummaa of na jibbisiiseera. Haqaa fi seera ittuma dhiisaa mee mucaa namummaaf yaada.
Dhaddachi kun bilisa ta’ee dhimma keenya ilaaluu qaba. Ta’uu baannaan kaabbaa abbaa seerummaa uffatanii ergama biraaf waan as teessan natti fakkaata. Mana hidhaa keessatti dhiittaan mirga namoomaa deddeebi’ee nurratti raawwachaa jira. Carraa Oromoota nudura gatii qaqqaalii kaffalanii nutis qaqqabee jira. Kaffaaloo Tafarraa miilla lamaan mana hidhaa galee lachuu dhabee kan bahe dhaddacha kanatti osuma deddeebi’uuti. Taaddasaa Birruu fi Maammoo Mazamir dhaddachuma kanatti du’aan adabaman. Kanaaf akkuma feetanitti ykn nuuf murteessaa ykn nutti murteessaa.
Jaal Lammii Beenyaa fi Jaal Daawwit Abdataa mana hidhaa keessaa dhabamsiifaman.
Seenaa Garaa Namaa Nyaatuu